Imise lacag ah ayay Kooxda kubadda cagta Chelsea dul dhigtay madaxa Marcos Alonso? – Gool FM
(London) 20 Feb 2020. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa la ogaaday qiimaha ay dul dhigtay madaxa daafaceeda Marcos Alonso.
Chelsea ayaa lagu soo warramayaa inay 25 milyan oo gini ku qiimeynayso daafaceeda bidix ee Marcos Alonso sida wararka ay sheegayaan.
Inkastoo uu ku raaxaysanayay muddo guulo ah oo uu ku gaaray garoonka Stamford Bridge, haddana Alonso ayaa ku dhacay xulashada tababare Frank Lampard, isagoo saddex kulan oo kaliya ku soo bilaawday safka hore tan iyo bilowgii bishii November.
Xiddigan reer Spain ee Alonso ayaa ka mid ahaa xiddigaha ugu fiican daafaca, balse tan iyo markii uu yimid macallin Lampard ayaa wuxuu waayay booskiisa joogtada ah isagoo laga doorbidayay xiddiga reer Brazil ee Emerson, kaasoo iminka qaab ciyaareed wanaagsan ku jira.
29-sano jirka ayey Chelsea ku doonaysa inay dhaafsato lacag dhan 25 milyan oo gini, waxaana aad u doonaysa Kooxda reer Talyaani ee Inter Milan.
Majaallada Calciomercato ee ka soo baxda gudaha Talyaaniga ayaa fahansan in kooxda Inter ay damacsan tahay inay la soo saxiixato xiddigan maadama uu joogo kooxdaa Macallinkii hore Chelsea Antonio Conte kaasoo yaqaanna qaab ciyaareedka laacibkan.
Si kastaba ha noqotee, Marcos Alonso ayaa kooxda Chelsea ku soo biiray sanadkii 2016-kii isagoo u saftay 103 kulan wuxuuna u dhaliyay 16-gool oo qura kooxda ka arrimisa galbeedka London ee Chelsea.